नेपालकी साझा छोरी टेरिया मगरमाथि भो नगर घिनलाग्दो राजनिति !
[2014-06-23 오전 9:26:00]
भारतीय टेलिभिजन च्यानल जी टिभीबाट प्रशारण भइरहेको रियालीटी सो डीआईडी लिटिल मास्टर्स-३ जितिन टेरिया मौजा मगरले । गाउँका गरिव परिवारकी मेहनती वालिकाले चालिस हजारलाई उछिनेर त्यो जित्नु समग्र नेपालीका लागि गौरव हो । अन्तिम अवस्थामा दर्शकका भोटले हारजित हुन्थ्यो । टेरियाले आफूलाई म मगर, म जनजाति भनेर भोट मागिनन् । सबै नेपालीसित भोट मागिन् । उनको प्रचारप्रसार गर्ने सञ्चार माध्यमपनि सबै जनजातिका थिएनन् । सबै नेपालीले गरे । सबैले साथ दिए । सामाजिक सञ्जालदेखि अनलाईन र ठूला मेडियासम्मले मेहनत गरे टेरियालाई जिताउन । तर जितिसकेपछि सामाजिक सञ्जालहरुमा टेरियाको बिजयमाथि राजनिति गर्न खोजिएको देखिएको छ । यो घ्रिणायोग्य पक्ष हो ।
जनजाति आन्दोलनका नेता, अग्रज, संघिय समाजवादी पार्टीका पनि नेता आङकाजी शेर्पाको फेसबूक भन्दै लेखिएको छ “कला क्षेत्रमा जातको प्रसंग उठाउनु पर्दा मलाई दुख लागेको छ । तर काठमाडौंको केहि साईवर पसलहरुमा नेपाली छोरी तेरिया मगरलाई भन्दा भरतकी अनुस्का क्षेत्री जिताउने अभियानमा लागेका नेपाली आर्यहरु भेटियो । लाखौं आदीबासीको भोटले तेरिया मगरले डि आइ डि न्रित्य प्रतियोगीताको प्रथम स्थान जित्न सफल भएकोमा हार्दिक बधाई । नेपाली आर्यहरुको चरित्र देख्दा “रगत पानी भन्दा बाक्लो हुन्छ” भन्ने अंग्रेजी उखानको स्मरण भयो ।”
आङकाजी शेर्पाका नाममा अन्यले नक्कली आइ डीमा फेसबूक खोलेर बदनाम गराउन खोजेको भनाई आङकाजी शेर्पाले पहिलेपनि राख्दै आएका हुन् । त्यसो हो भने यो भनाई लेखिएको आइ डिपनि नक्कली हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा शेर्पाले प्रहरी निकायलाई खबर गरेर आफ्नो आइ डी खोल्नेलाई कारवाही गराउनुपर्छ । यो अपराधिक काम हो । यदि यो भनाई आङकाजी शेर्पाकै हो भने पुरै निन्दनिय, भर्त्सनायोग्य, अपाच्य र अदुरदर्शी छ । यसको बिरोध हुनै पर्छ । यस्तो सोच, यो तल्लो स्तरको बुझाईले न त आम नेपालीको नेत्रित्व गर्न सकिन्छ नत जनजातिका सहि मागहरुलाई जनतामा स्थापितनै गराउन सकिन्छ । जे होस् विषयले ब्यापकता पाएको छ । यसमा आङकाजी शेर्पाले पक्कै स्पष्ठ पार्नुपर्छ ।
ति भनाईमाथि बिरोध गर्नुका केहि तर्क छन् । पहिलो कुरा टेरिया मगर भएपनि उनले आफूलाई जनजातिको मात्रै साँघुरो घेरामा सिमित गरेकि छैनन् । आफूलाई समग्र नेपालीका रुपमा उभ्याएर प्रतिस्पर्धमा भाग लिइन् । जिटिभीमापनि प्रस्टै भनिएको छ ‘नेपालकी तेरिया मगर” बह्नेर । जनजातिकि तेरिया मगर भनिएको छैन । उनलेपनि सबै नेपालीसित सार्वजनिक आव्हान गरेरै भोट मागिन् । कुनैपनि जातजाति, भाषा र वर्ग नभनि सबै नेपालीले मतदान गरे । उनमा प्रतिभा भएकोले त्यति माथि पुगेकि हुन् । जातिय रंग र राजनिति, जातिय आन्दोलनमा उनको समर्थन् वा विरोधले होइन । मत जति नेपालीले दिए त्योपनि उनलाई कसैले जातिय राजनितिको रंग घसिदेओस् भनेर होइन । उनी नेपालकी छोरी, प्रतिभाशाली वालिका र सहसी भएकोले हो । त्यो हार्दिकता, त्यो नेपालीपन, एकता सदा कायम रहनु पर्छ । सबैले त्यसकालागि प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईसम्मले सार्वजनिक रुपमै मत मागेका छन् उनको लागि । के उनीपनि मगर भएर, जनजाति भएर मागेका हुन् ? म आफैंलेपनि धेरै मेडियाले नदिएका बेला शुरुमै उनको तस्विर सहित समाचार बनाएर प्रचारप्रसार गरें । मतदानलागि आव्हान गरें । त्यो धेरैले गरे । जनजातिले मात्रै वा मगर जातिले मात्रै मतदान दिएको भए उनको जित निश्चित हुन सायद सक्ने थिएन । सुनिएको छ, उनले समग्र नेपालको जनसंख्या भन्दापनि बढि मत ल्याएकि छन् । यसरि समग्र नेपालीले माया दिएकि, आफ्नो ठानेकि, कुनै जात र भाषामा सिमित नराखिएकि वालिकालाई जनजातिले मत दिएर जितिन भन्नु अबुझपन, अदुरदर्शीता, गलत बुझाई र साँघुरो घेरो भएकाले मात्रै हो ।
काठमाडौको कुनै पसलेले अनुस्कालाई जिताउन खोज्यो भनेर समग्र आर्यानलाई आर्यानको पक्षमा लागे भनेर दोष लगाउनु कुनै एक शेर्पाले मानिस मार्यो भनेर सबै शेर्पा हत्यारा, कुनै एक शेर्पाले गैंडाको खाग चोरी गर्यो भने सबै शेर्पा जिवजन्तुका तस्कर भने जस्तै हो । समाजमा सचेत भनिएका ब्यक्ति र वर्गले यसरि कुनै जात, वर्ग विशेषमाथि आरोप लगाउनु, होच्याउनु क्षम्य हुन सक्दैन । देशलाई सहि राजनितिक दिशा दिन्छु भन्ने नेता, पत्रकार, लेखक, समाजसेवीहरुले झन गम्भिर बनेर प्रस्तुत हुनुपर्छ । टेरिया मगर कुनै एक जातजाति, भाषी र वर्गकी छोरी होइनन् हामी सबै नेपालीकि हुन् । सबैले रातदिन नभनी हजारौं मत दिएर जिताएकि नेपालकी साझा छोरीको बिजयमाथि भो नगर घिनलाग्दो राजनिति कसैलेपनि !!
आदिवासी जनजातिका एक स्थानिय अभियन्ता, समर्थक गोपाल तामाङजीले माथिल्लो लेख प्रकाशित भएको केहिबेरपछि दिनु भएको प्रतिक्रिया सामाजिक सन्जाल फेसबुक तिर तेरिया मगरको जितमा आङ काजी शेर्पाले जातिय राजनिती गर्यो भनेर निकै गलत भ्रम प्रचार गरिएको पाए र त्यही बिषयमा ददि सरले नेपालप्लसमा पनि लेख्नु भएछ त्यसैले त्यसको बारेमा यहाँ केही सत्य खुलाउन चहान्छु ।
ददि सर अनि अन्य सबै मित्रहरुलाई प्रष्ट होस कि जुन आरोप आङकाजी माथी लगाइएको छ त्यो मिथ्या गलत आरोप हो । त्यस्तो लेखेको त्यो फेक आइडी स्वयम त्यो नेपाली आर्य भन्ने मकुन्डेधारी अतिबादीको हो ।
आङकाजीले तेरियाको बिषयमा त्यस्तो बोल्छ भनेर कल्पना मात्र गरे पनि हामी गलत हुनेछौ किनकी बिस्वभरी छरेर रहेको नेपालि लगाएत भारतकै मान्छेहरुले भोट दिएकोले उनले जितेकी हुन भन्ने हामी सारालाइ थाहा छ । त्यती सामान्य कुरा पनि आङ काजिले बुझ्दैन भनी सोच्नु गलत हुन्छ ।
मलाइ लाग्छ यो बारेमा उहाँले प्रतिक्रिया अवस्य दिनु हुनेछ । जहाँ सम्म प्रहरीलाई रिपोर्ट गरेर फेक आइडिवाला समात्ने भन्ने कुरा छ त्यो त धेरै पहिले नै रिपोर्ट गरिसकेको भन्ने सुन्नमा आको छ तर आज सम्म दोषीलाई समातेको छैन । के गर्दैछ प्रहरी ? अहिले सम्म त समातेर पनि कार्बाही गर्नु पर्ने हैन र ?
अर्को कुरा त्यो नेपालि आर्य भन्ने अतिबादी समाजको भाइरस सक्कली आर्यान जातीकै हो भन्ने कुरामा दुईमत नहोला त्यसैले त्यस्ता समाज भाड्नेलाई चाहिँ कसैले छाड्नु हुदैन भन्ने लाग्छ ।
त्यो आङ काजीको फेक आइडिले मलाई पनि एड गरेको थियो तर मैले अकेप्त् नगरे पछि उसले मलाइ मनपरी मुख छाडेर धेरै दिन सम्म डिस्टर्ब गरेको थियो अनि पछि त्यो आफै थाकेर मलाइ ब्लोक गर्यो ।।